SPC Smartee Boost, smartwatch na ọnụ ahịa dị oke ọnụ | Akụkọ Ngwa
Miguel Hernandez | 09/08/2021 10:00 | General, Nyocha
Ekebelarị elekere elekere smart n'aka ndị ọzọ, maka ụdị dị ka SPC na -enye ngwaahịa nke ohere nnweta maka mmadụ niile. N'okwu a, anyị na -ekwu maka elekere mara mma, nke bụ ihe anyị ga -enyocha, yana nke ọma karịa maka nhọrọ ọzọ mara mma ma ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ọnụahịa na arụmọrụ.
Anyị na -ekwu maka SPC's Smartee Boost, smartwatch kachasị ọhụrụ ya na GPS agbakwunyere na nnwere onwe dị ukwuu nke a na -enye na ọnụ ahịa akụ na ụba. Chọpụta anyị ngwaọrụ ọhụrụ a ma ọ bụrụ na ọ bara uru n'ezie n'agbanyeghị ọnụ ahịa ezi uche ya, echefula nyocha a dị omimi.
Dị ka ọ na -eme n'ọtụtụ oge, anyị ekpebiela isoro vidiyo a soro nyocha a anyị YouTube channel, n'ụzọ dị otu a, ị ga -enwe ike ịhụ ọ bụghị naanị igbe mbata kamakwa usoro nhazi niile, yabụ anyị na -akpọ gị oku ka ị kwado nyocha a ị nwere ike lelee ma nyere anyị aka ịnọgide na -eto.
3 Ihuenyo na ngwa
4 Ọzụzụ na nnwere onwe
5 Ọrụ na ahụmahụ
Dị ka enwere ike ịtụ anya na elekere n'ụdị ọnụahịa a, anyị na -ahụ ngwaọrụ nke ejiri plastik mee. Ma igbe na ala na -ejikọ ụdị plastik ojii matte, n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike ịzụta ụdị pink.
Arọ: gram 35
Akụkụ: 250 x 37 x 12 mm
Eriri agbakwunyere bụ nke zuru ụwa ọnụ, yabụ anyị nwere ike dochie ya ngwa ngwa, nke bụ uru na -atọ ụtọ. O nwere akụkụ nke 250 x 37 x 12 mm n'ozuzu ya na ọ baghị nnukwu ibu, ma tụọ naanị gram 35. Ọ bụ obere kọmpat elekere, ọ bụ ezie na ihuenyo adịghị n'ihu niile.
Anyị nwere otu bọtịnụ nke na -eme ka ọ bụrụ okpueze n'akụkụ aka nri na azụ, na mgbakwunye na ihe mmetụta, ọ nwere mpaghara ndọta magnetized maka chaja. N'akụkụ a, elekere ahụ dị mma ma dịkwa mfe iji.
Anyị na -elekwasị anya na njikọta, ọ bụ na ọ dabere na isi ihe abụọ. Nke mbụ bụ na anyị nwere Bluetooth 5.0 LE, Yabụ, ọkwa nke sistemụ agaghị emetụta batrị nke ngwaọrụ n'onwe ya ma ọ bụ nke ama anyị ji. Na mgbakwunye, anyị nwere GPS, Yabụ na anyị ga -enwe ike ijikwa mmegharị anyị nke ọma mgbe anyị na -ahazi oge ọzụzụ, na ule anyị ọ rụpụtara ezigbo nsonaazụ. N'otu ụzọ ahụ GPS na -achọpụta anyị ka anyị buru n'uche akụkụ ụfọdụ nke ngwa ihu igwe agụnyere.
Elekere anaghị egbochi mmiri ruo mita 50, n'ụkpụrụ o kwesịghị inwe nsogbu ọ bụla mgbe ya na ya na -egwu mmiri, nke a nwere ike ịbụ n'ihi na o nweghị igwe okwu na ndị na -ekwu okwu, agbanyeghị na ọ nwere ọ na -ama jijiji ma ọ na -eme nke ọma. O doro anya na anyị nwere nha obi, mana ọ bụghị site na nha oxygen ọbara, ihe na -arịwanye elu.
Anaghị m echefu ọrụ ọ bụla ọzọ ma ọ bụrụhaala na anyị na -eburu n'uche ọnụahịa dị ala nke ngwaahịa a, nke emebere maka oke nnweta.
Ihuenyo na ngwa
Anyị nwere obere panel IPS LCD, ọkachasị na ọ bụ 1,3 sentimita na mkpokọta nke na -ahapụ etiti ala akpọrọ akpọtụ. N'agbanyeghị nke a, ọ na -egosi ihe zuru oke maka ịrụ ọrụ kwa ụbọchị. N'ihi ndokwa ya na ule anyị, anyị enweela ike ịgụ ọkwa na ọ nwere ụfọdụ uru ama ama.
Nke mbụ bụ na ọ bụ laminated panel nke nwekwara mkpuchi mgbochi echiche maka iji ya dị mfe na ìhè anyanwụ. Ọ bụrụ na anyị na -eso nke a na -enwu enwu na nke kacha nta ọ na -enye, nke bụ eziokwu bụ na iji ya eme ihe n'èzí dị mma, o nwere akụkụ dị mma na anyị anaghị efufu ozi ọ bụla.
Ngwa Smartee dị maka iOS na maka android Ọ dị nfe, n'oge a na -emekọrịta ya, anyị ga -emerịrị ihe ndị a:
Jụọ ngwaọrụ ka ọ buo
Anyị na-ebudata ngwa ahụ
Anyị na -abanye wee dejupụta ajụjụ ahụ
Anyị na -eji akara nọmba nke igbe ahụ enyocha barcode
Igbe SPM Smartee anyị ga -apụta wee pịa jikọọ
Ọ ga -adaba n'ụzọ zuru oke
Na aplicación Anyị nwere ike jụọ ọtụtụ ozi metụtara arụmọrụ anụ ahụ anyị dịka:
Ebe dị anya gara
Nnyocha mkpụrụ obi
N'agbanyeghi ihe niile, ngwa a nwere ike ịdị nfe. Ọ na -enye anyị obere ozi, n'agbanyeghị na ọ zuru ezu maka ihe ngwaọrụ kwuru na -enye.
Ọzụzụ na nnwere onwe
Ngwaọrụ nwere ọnụọgụ atọrọ ntọala, nke bụ ihe ndị a:
Na-agba ọsọ na igwe ịgba ọsọ
Ịgba ígwè n'ime ụlọ
Na -eje ije n'ime ụlọ
Mmiri ighe mmiri
GPS ga -arụ ọrụ na akpaghị aka na mmemme "n'èzí". Anyị nwere ike gbanwee ụzọ mkpirisi nkuzi a na njikwa onye ọrụ nke elekere n'onwe ya.
Banyere batrị anyị nwere 210 mAh nke na -enye karịa ụbọchị iri na abụọ na -aga n'ihu, Mana site na ụfọdụ nnọkọ na -arụ ọrụ yana GPS arụ ọrụ, anyị belatara ya ruo ụbọchị iri, nke adịghịkwa njọ.
Ọrụ na ahụmahụ
Njirimara onye ọrụ nwere nghọta, ee, anyị nwere naanị akụkụ 4 nke anyị nwere ike ịgbanwu site na ịpị ogologo na 'mmalite'. N'otu aka ahụ, na ngagharị aka ekpe anyị nwere ohere ịnweta GPS yana ọrụ ịchọta ekwentị, nke ga -ewetara ụda.
Ihe na: 9 August 2021
N'aka nri anyị nwere data ahụike na ọzụzụ, yana na drọwa ngwa anyị ga -enwe ike ịnweta mkpu, ngwa ihu igwe na ụfọdụ ndị ọzọ ga -enyere anyị aka maka ịrụ ọrụ kwa ụbọchị. N'ikwu eziokwu, ọ na -enye ọrụ ole na ole karịa ihe mgbaaka nsuso egwuregwu ga -enye, mana nha ihuenyo na ihu onye ọrụ na -eme ka ọ dị mfe iji ya kwa ụbọchị.
Na nkenke, anyị nwere ngwaahịa nke yiri mgbaaka nsuso, mana na -enye ihuenyo nwere ezigbo ihie yana nha zuru oke. iji mee ka ọ dị mfe iji ya na ọnụ ahịa dị n'okpuru euro 60 na ebe a na -erekarị. Nhọrọ ọzọ na -atọ ụtọ yana ọnụ ahịa dị oke ọnụ mgbe anyị na -ekwu maka smartwatch.
Ngosipụta arụmọrụ na -enwu gbaa
Ọ nwere GPS na ọtụtụ mgbatị ahụ
I nwere ike iji ya gwuo mmiri
Nnwere onwe dara na GPS na -arụ ọrụ
Mita oxygen adịghị efu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nyocha » SPC Smartee Boost, smartwatch na ọnụ ahịa dị oke ọnụ